विवादित जमिनबारे भारतीय राजदूतलाई परराष्ट्र सचिवले के भने ? - Naya Patrika
पर्शुराम काफ्ले काठमाडौं, ८ माघ | माघ ०८, २०७४
परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले आइतबार भारतीय राजदूत मञ्जिब सिंह पुरीलाई नेपाल भारत सीमा व्यवस्थापन ‘फिक्स्ड बाउन्डरी प्रिन्सिपल’ अन्तर्गत रहेको र अर्को व्यवस्था नभएसम्म पर्साको जमिन यथास्थितिमा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।
सचिव बैरागी र भारतीय राजदूत पुरीबीच आइतबार अपरान्ह टेलिफोनमा सम्वाद भएको थियो । नेपाल ब्राजिल द्धिपक्षीय संयन्त्रको बैठकमा सहभागी हुन त्यसतर्फ जानुअघि सचिव बैरागीले पुरीसँग कुराकानी गरेका थिए ।
सचिव बैरागीले सीमांकनको काम जारी रहे पनि जमिको स्वामित्वको बिषयलाई तत्काल यथास्थितिमा राख्नुपर्ने र बिवाद फिक्स्ड बाउन्डरी प्रिन्सिपलका आधारमा सल्टाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘समसामयिक बिषयबस्तुबारे भारतीय राजदुतसँग टेलिफोनमा कुराकानी भएको हो’ परराष्ट्रसचिव बैरागीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
नापी अधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई भने: हाम्रो धेरै जमिन उता गएको छैन
नापी विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भ्टटसहितका सीमा अधिकारीले आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटारमा भेटेर वीरगञ्जको सिरसियामा नेपाली जग्गा मिचिएको बिषयबारे जानकारी गराएको छ । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार सीमांकनका क्रममा नापी अधिकारीहरुले भारतको दुई दशमलब ८ हेक्टर जमिन नेपालतर्फ तथा नेपालको दुईदशमलब ६ हेक्टर जमिन भारत तर्फ परेको जानकारी दिएका छन् । भारतीयको जमिन नेपालतर्फ र नेपालीको जमिन पनि भारततर्फ परेको तर अहिले जसले भोगचलन गर्दै आएको छ, अर्को व्यवस्था नहुन्जेल त्यो कायम राख्ने सहमति सीमाअधिकारीहरुबीच भएको पनि उनीहरुले जानकारी दिएका थिए ।
मोदी–ओली ५ मिनेट वार्तामा के के भयो ?
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच ठीक एक महिनापछि टेलिफोन सम्वाद भएको छ । प्रदेश सभाका सांसदको शपथग्रहणसँगै आइतवारबाट संघीयता कार्यान्वयन भएकै दिन मोदीले नेपालको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले अध्यक्षलाई टेलिफोन गरेका हुन् ।
नेपाल र भारतबीच तराईमा सीमांकनका क्रममा बिबाद उत्पन्न भएको बेला मोदी र ओलीबीच सम्बाद भएको छ । तर, सम्वादमा यो बिषयले प्रवेश पाएको सार्वजनिक भएको छैन । पाँच मिनेटको कुराकानीमा नवबर्ष २०१८ को शुभकामना आदनप्रदानदेखि मोदीको नेपाल भ्रमण र ओलीको भविश्यमा भारत भ्रमण समेटिएको ओलीको निजि सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले गत डिसेम्बर २१ (६ पुस)मा टेलिफोन गरेका थिए भने यसपटक आइतबार (जनवरी २१)मा दोस्रोपटक फोन सम्वाद गरेका हुन् । यसअघिको सम्वाद नेपालका लागि भारतीय राजदत मञ्जिब सिंह पुरीमार्फत् भएको थियो । यसपटक भारतीय विदेशमन्त्रालयको नेपाल र भुटान डेस्क हेर्ने सहसचिव सुधाकर दलेलाले मोदीलाई सहजीकरण गरेको भारतीय कूटनीतिक स्रोतले बताएको छ ।
टेलिफोन वार्तापछि ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ, प्रधानमन्त्री मोदीले अध्यक्ष ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा शुभकामना दिएका छन् । मोदीले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा पदभार ग्रहण गरेपछि आफू भारतमा स्वागत गर्न प्रतिक्षारत रहेको बताएका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री मोदीको प्रस्ताव स्वीकार्दै उनलाई पनि नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दिएको अधिकारीले बताए । अध्यक्ष ओलीले मोदीलाई रामजानकी मन्दिर र मुक्तिनाथको दर्शन गर्न आग्रह गरे । २०७१ मंसिरमा मोदी झारखण्ड, विहार हुँदै स्थल मार्गबाट जनकपुर आउने कार्यक्रम अन्तिममा रद्द भएको थियो । २०७३ साउनमा भारत भ्रमणमा जाँदा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मोदीलाई जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथको धार्मिक भ्रमण गर्न आग्रह गरेका थिए । मोदीले त्यो बेला पनि नेपाल सरकारको उक्त प्रस्ताब अनुसार समय मिलाएर तीर्थयात्रा गर्ने बचन दिएका थिए ।
यसअघि ६ पुसमा प्रधानमन्त्री मोदीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि टेलिफोन गरेका थिए । ओली प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएपछि मोदीले उनलाई दोस्रोपटक फोन गरेका हुन् ।
मोदीले प्रधापमन्त्री देउवा, माअ‍ोवादीकेन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई टेलिफोन गरेका थिए । यसअघि मोदीले निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको सफलताका लागि ओलीलाई बधाई तथा शुभकामना दिएका थिए भने यो सफलताले नेपालमा लोकतन्त्र थप सुदृढ हुने, राजनीतिक स्थायित्व हुने र आर्थिक विकासमा नेपाल अग्रसर हुने मोदीको भनाई थियो ।
मोदीले यसपटक पनि ओलीलाई भारत भ्रमणका लागि निमन्त्रणा दिएका छन् । उनले ६ पुसमा पनि निमन्त्रणा दिएका थिए । यसपटक पनि मोदीले ओली नेतृत्वमा गठन हुने नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न र प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीलाई स्वागत गर्न भारत आतुर रहेको स्पष्ट पारेका छन् । ओलीले पनि वामगठबन्धनले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका थिए । उनले यसअघिको टेलिफोन सम्वादमा पनि यही बिषय मोदीलाई भनेका थिए ।